Antony 10 lehibe tokony hahazoanao BS amin'ny Psychology Applied ao Hodges U:
fianarana psikolojia olombelona, fitondran-tenan'olombelona, ary ny fomba hanentanana ny hafa amin'ny alàlan'ny tetikasa isan-karazany, sy fifanakalozan-kevitra, ao anatin'izany ny kilasy "Psycholojia fanandramana" ankafizin'ny mpianatra.
Dmampivoatra fahaiza-misaina mafy ary mampihatra foto-kevitra ara-tsaina amin'ny toe-javatra famahana olana.
Smanatsara ny fahaizan'ny fifandraisana amin'ny vava sy an-tsoratra amin'ny alàlan'ny fifanakalozan-kevitra ao an-dakilasy, tetikasan'ny vondrona ary sanganasa.
Mamorona drafi-pitsaboana vazivazy amin'ny alàlan'ny simulateur realistic izay misy ny famakiana scenario feno amin'ny antsipirihany sy ny fiasa ho toy ny manam-pahaizana manokana momba ny fidiram-bola ho an'ny karazana fikarakarana mpanjifa isan-karazany, ao anatin'izany ny fitaintainanana na ny fanararaotana fanafody.
Ianaro ny fomba hanondroana ireo mpanjifa any amin'ireo masoivohon'ny vondrom-piarahamonina mifototra amin'ny diagnostika, ny toe-javatra ary ny filan'ny mpanjifa.
Manararaotra Fanamarinana manokana ao amin'ny Counstance Abuse Counselling, izay natao hanomanana ny mpianatra amin'ny Fanamarinana Certified Addiction Professional (CAP) avy amin'ny Florida Certification Board.